Rag hubeysan ayaa weerarey dhisme ku yaal magaalada Karachi ee dalka Pakistan – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Rag hubeysan ayaa weerarey dhisme ku yaal magaalada Karachi ee dalka Pakistan
Rag hubeysan ayaa weerarey dhisme ku yaal magaalada Karachi ee dalka Pakistan
Ugu yaraan todobo qof ayaa la dilay kadib markii dabley hubeysan ay weerareen suuqa saamiyada ee Pakistan ee kuyaala koonfurta magaalada Karachi, ayaga oo rasaas aan kala sooc laheyn u galay dhismaha dhismaha, saraakiisha badbaadada ayaa leh.
Afar weeraryahan ayaa weerartay dhismaha subaxnimadii Isniinta iyadoo ganacsigu bilaabmay 10:00 aroornimo saacadu markay ahayd (05:00 GMT), iyagoo watay bambaanooyinka gacanta laga tuuro qoryaha darandooriga u dhaca.
Afarta qof ee weerarka soo qaaday waxaa dilay booliska iyo ciidamada amniga oo ka jawaabaya weerarka, ayuu yiri Faysal Edhi, oo ah madaxa hay’adda samafalka Edhi iyo adeegga ambalaaska ee magaalada ka shaqeeya.
Edhi, oo xafiiskiisu ku yaal banaanka dhismaha la bartilmaameedsaday ee degmada ganacsiga ee Karachi ayaa yidhi.
“Waxaan maqalnay qaraxyo ka socda [dhismaheenna],” ayuu yidhi.
Dadka dhintay waxaa ku jira afarta qof ee weerarka soo qaaday, bilays iyo laba qof oo rayid ah, ayuu yidhi Edhi. Toddobo kale ayaa sidoo kale lagu dhaawacay weerarka, ayuu yidhi.
Kooxda hubaysan ee Baloch Liberation Army ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarka, war qoraal ah oo la sii daayay halka howlgalka amniga lagu nadiifinayo dhismaha uu socday.
“Guutada Majeed ee ciidamada xorta ee Baloch ayaa maanta qaaday weerar isbiimeyn ah oo ku saabsan isdhaafsiga saamiga Karachi,” ayaa lagu yiri qoraalka, oo lagu soo diray emailka Al Jazeera.
Kulligeen waan argagnay
Goobjoogayaal ka shaqeynayay gudaha dhismaha markii weerarku dhacay ayaa tilmaamay maqalka rasaas culus iyo qaraxyo markii kooxdii soo weerartay ay galeen dhismaha.
Abid Habib, oo ah maamulaha Suuqa Bakhaarada Pakistan (PSX), ayaa yidhi: “Dhamaanteen waan argagaxsanahay. “Waxaa jiray rasaas iyo wax walba, oo si lama filaan ah qof walba wuxuu u ordayay daaqadaha si uu u arko waxa dhacaya.
Sababta oo ah rasaasta ayaa u dhawaa, qof walba aad ayuu u walwalsanaa waxaanan xirnaa albaabbadeenna dibedda.
Ciidamada ammaanka ayaa ka jawaab celiyay weerarka, oo ciidamada ilaalada ka ah ee Rangers ay nadiifinayeen dhismaha, ayuu yiri Habib.
Muuqaalka fiidiyowga ah ee weerarka – oo ay toogteen shaqaale xafiiska jooga dhisme ka soo horjeedka dhismaha PSX oo uu ka helay Al Jazeera – ayaa muujisay afar weeraryahan oo ka soo degay gaari isla markaana jagooyin ka qaatay carqalado xagga amniga dhismaha ah, oo ay toogteen ilaalada amniga.
Wadooyinka dhiiga ayaa lagu daadiyey jaranjarada iyo dariiqa ku dhow dhismaha, labo fiidiyowyo iyo sawirro ay soo direen shaqaalaha gudaha dhismaha ayaa muujinaya.
PSX waa Bakhaarka ugu weyn ee Pakistan, iyadoo in kabadan 2,000 oo shaqaale ah ay caadiyan ka shaqeeyaan dhismaha isdhaafsiga iyo shirkadaha ganacsiga ee xiriirka la leh.
Isu soo-baxa shaqada ayaa hoos u dhacday Isniintii sababo la xiriira daacuunka ‘coronavirus’, markii shirkado badan ay doorteen inay u oggolaadaan shaqaalahooda inay guryahooda ka shaqeeyaan, ayuu yidhi Habib.
Ka ganacsiga ‘PSX’ wuxuu ahaa mid aan kala go ‘lahayn inta uu socday weerarkii Isniinta, ganacsatada iyo falanqeeyayaasha sinnaanta ayaa u sheegay Al Jazeera, maaddaama sarrifka saamiyada uu ku shaqeynayo nidaam khadka tooska ah ee elektaroonigga ah.
Previous articleFor the first time, the scent of “space smell” reveals an exciting secret
Next articleMuuse biixi oo xilal ka qaadey badhsaabo gobalo qaarna magacaabey
Ciidanka Kenya oo dilay xubno ka mid ahaa Al-Shabaab